Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziQhekezayo zaseAfghanistan » Kwiintangatye: Kuqhambuke umlilo omkhulu kwisikhululo senqwelomoya saseKabul
Iindaba eziQhekezayo zaseAfghanistan • Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Kuncinci okwaziwayo malunga nobunzima bomlilo okanye imvelaphi, kodwa iividiyo ezithunyelwe kwimithombo yeendaba zentlalo zibonisa ilifu elinomsi lenyuka kwisikhululo seenqwelomoya, nesibe yindawo ekugxilwe kuyo yi-US kunye neNtshona kwimizamo yokukhutshwa kule veki iphelileyo.
Umlilo uxele kwisikhululo senqwelomoya saseHamid Karzai.
Ilifu elikhulu lomsi lenyuka kwisikhululo seenqwelomoya.
Imeko yezokhuseleko kwisikhululo seenqwelomoya ihlala ithambile.
Umlilo omkhulu uqhambukile kwisikhululo senqwelomoya saseKabul eHamid Karzai eAfghanistan, phakathi kokufuduka okungalawulekiyo kunye namawaka abantu abafuna ukuphuma kweli lizwe.
Iindaba zomlilo ziqhekeze ngokuhlwa kwangomvulo ixesha lendawo. Kuncinci okwaziwayo malunga nobunzima bomlilo okanye imvelaphi, kodwa iividiyo ezithunyelwe kwimithombo yeendaba zentlalo zibonisa ilifu elinomsi lenyuka kwisikhululo seenqwelomoya, nesibe yindawo ekugxilwe kuyo yi-US kunye neNtshona kwimizamo yokukhutshwa kule veki iphelileyo.
Imeko yezokhuseleko kwisikhululo seenqwelomoya ihlala ibuthathaka, kunye nemikhosi yase-US kunye nomanyano olusebenzela ukukhupha amawaka abantu babo kunye nababaleki base-Afghanistan eKabul. Iiyure ngaphambi kokuba umlilo uqhume, imikhosi yase-US kunye neJamani bangena kumlo wemipu kunye nabahlaseli abangaziwayo, kutshintshiselwano ngomlilo oshiye ijoni elinye lase-Afghanistan liswelekile. Ubuncinci abantu be-20 basweleke kwisikhululo seenqwelomoya kwiveki ephelileyo, utshilo umphathi we-NATO.
Akukacaci ngexesha lokubhalwa ukuba umlilo ubuchaphazela iinqwelomoya ukuya nokubuya kwisikhululo seenqwelomoya. Iinqwelomoya bezimka kwisikhululo seenqwelomoya ngaphandle kokuma kwimpelaveki, kunye nabaphathi beBiden abathi bakhuphe abantu abayi-11,000 kwiiyure ezingama-36. Nangona kunjalo, amawaka aseleyo asele eKabul, kwaye amathuba okuba i-US kunye namahlakani ayo ahlangane nomhla wokugqibela ka-Agasti 31 wokurhoxa kwabo ngoku ubuzwa.
I-Taliban, ebambe amandla e-Afghanistan ngaphezulu nje kweveki edlulileyo, ulumkisile "ngeziphumo" ukuba umhla wokugqibela awufezekiswanga.